Nnwom 111 NA-TWI - Mateo 111 MTDS | Biblica América Latina
Nnwom 111 NA-TWI - Mateo 111 MTDS
Awurade ayeyi dwom
1Kamfo Awurade! Mifi me koma nyinaa mu bɛda Awurade ase wɔ ne nkurɔfo a wɔabɔ gua no anim. 2 Nneɛma a Awurade yɛ no yɛ nwonwa! Wɔn a wɔn ani gye ho no pɛ sɛ wɔte ase. 3 Tumi ne anuonyam wɔ nea ɔyɛ biara mu na ne trenee wɔ hɔ daa.
4 Awurade remma yɛn werɛ mfi n’anwonwade. Ne yam ye na ohu mmɔbɔ. 5 Wɔn a wodi no ni no, ɔma wɔn aduan. Ne werɛ mfi n’apam. 6 Wakyerɛ ne tumi akyerɛ ne nkurɔfo sɛ ɔde ananafo asase ama wɔn. 7 Biribiara a ɔyɛ no, ɔyɛ no nokwarem. Ne mmara nni huammɔ. 8 Bere biara ɛwɔ hɔ. Wɔhyɛɛ no nokware ne trenee mu. 9 Ɔmaa ne nkurɔfo dee wɔn ho na ɔne wɔn yɛɛ apam a ɛwɔ hɔ daa. Ɔyɛ kronkron ne Otumfoɔ!
10 Worepɛ nyansa a, di Awurade ni. Obu wɔn a wodi ne mmara so nyinaa atɛntrenee. Ɔsɛ ayeyi daa.
NA-TWI : Nnwom 111